प्रदेश ३ को राजधानी काभ्रेमा किन ? मेयरले दिए ३ कारण – Rastriyapatrika
प्रदेश ३ को राजधानी काभ्रेमा किन ? मेयरले दिए ३ कारण
३० कात्तिक, काठमाडौं । हेटौंडाले प्रदेश राजधानीलाई स्थायी कायम गर्न सबै शक्ति लगाइरहेका बेला काभ्रेपलाञ्चोक भने प्रदेश ३ को राजधानीका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयारी हालतमा राखेर बसेको छ । हेटौंडासँग अस्थायी राजधानी बाहेक ठूलो शक्ति छैन, तर काभ्रेसँग प्रदेशसभाको दुई तिहाई भन्दा बढी मत सुरक्षित रहेको दाबी काभ्रेली नेताहरुको छ ।
आखिर प्रदेशसभामा काभ्रेलाई राजधानी बनाउने सांसदहरुको संख्या दुई तिहाई भए पनि किन निर्णय हुन सकेन त ? यसको एउटै कारण छ– यो प्रदेशको राजधानीसँग सिंगो नेकपाको राजनीति र अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिष्ठा पनि जोडिएको छ । त्यसैले प्रदेशसभामा एकल निर्णय गर्ने हैसियतमा रहेको नेकपाले केपी ओली र प्रचण्डको सिग्नल नपाउँदासम्म प्रदेश ३ को राजधानीको टुंगो लाग्ने छैन ।
प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी काभ्रेमै किन हुनुपर्ने ? यसका प्रमुख तीन कारण बताइदिनुस् भनेर हामीले नगरपालिका संघका अध्यक्ष समेत रहेका धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर तथा तत्कालीन एमालेका काभ्रे जिल्ला उपाध्यक्ष अशोक ब्यान्जुलाई सोध्यौं ।
उनले काभ्रेमै राजधानी हुनुपर्ने कारणहरु व्याख्या गरे–
१. प्रदेशको राजधानीमा सबै पूर्वाधार चाहिन्छ । विश्वविद्यालय, अस्पताल, ठूला राजमार्ग र होटलहरु । काभ्रेमा यी सबै पूर्वाधार छन् । हामीसँग काठमाडौं विश्वविद्यालय छ । धुलिखेल अस्पताल छ ।
२. प्रदेशको राजधानी भनेको सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा हुनुपर्छ । संघीय राजधानीसमेत भएको भएको हुनाले यो प्रदेशको राजधानी काभ्रे नै उपयुक्त हुन्छ । अधिकांश यस प्रदेशका मान्छेको उठबस र बसोबास आफ्नो जिल्ला बाहेक काठमाडौं उपत्यकामा छ । प्रदेश सभाका सदस्यहरु अहिले हेटौंडामा बस्न सक्दैनन् । सबैका परिवार यतै छन् ।
३. हामीले अबको १० वर्षपछिको पनि विचार गर्नुपर्छ । हाम्रो विकासको रफ्तार र जनसंख्या बढदै जाँदा राजधानीको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो जमिनको उपलब्धता काभ्रेमा छ । भोलिका चुनौति सामना गर्न सक्ने सबै पूर्वाधार हामीसँग तयारी अवस्थामा छन् । अहिले धुलिखेल नगरपालिकाले प्रदेश राजधानीका लागि थप १ हजार रोपनी दिन सक्छौं भनेका छौं ।
खानेपानीको समस्या अझै ५० वर्षसम्म यहाँ हुँदैन । खेलमैदान ५ वटा छन् । हामी राजधानी आउना साथ सबै मन्त्री,सांसद समेतलाई आवास भवन समेत उपलव्ध गराउन सक्छौं । नयाँ संरचना बनाउनेभन्दा भइरहेका संरचना पयोग गर्ने हिसाबले पनि काभ्रे उपयुक्त छ । -Source : Online Khabar